तपाइँको Mac मा macOS Monterey 12.2 beta कसरी डाउनलोड गर्ने | म म्याक बाट हुँ
तपाइँको Mac मा macOS Monterey 12.2 beta कसरी डाउनलोड गर्ने
मानुएल एलोन्सो | | ट्यूटोरियलहरू
एप्पलले विकासकर्ताहरूको लागि macOS Monterey 12.2 को सार्वजनिक बिटा के हो जारी गरेको छ। यसमा, उदाहरणका लागि, हामीलाई थाहा छ कि प्रोमोशन टेक्नोलोजीले काम गर्दछ तर त्यो धेरै राम्रो छ र प्रयोगकर्ताहरू यो कार्यक्षमता संग धेरै खुसी छन्। तर निस्सन्देह, अहिले बिटा स्थापना भएकाहरूले मात्र यसको मजा लिन सक्छन्। यस पोष्टमा हामी तपाईंलाई कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछौं आफ्नो कम्प्युटरमा परीक्षण संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस्।
हामी कसरी macOS Monterey को beta 12.2 संस्करण स्थापना गर्न सक्षम हुनेछौं भनेर व्याख्या गर्न सुरु गर्नु अघि, हामीले ध्यान दिनुहोस् कि बिटा संस्करणहरू ती हुन् जुन परीक्षण अन्तर्गत छन् र त्यसैले केही हदसम्म अस्थिर हुन सक्छ। यसैले हामी सिफारिस गर्छौं कि यदि तपाइँ वास्तवमै तपाइँको कम्प्यूटरमा यो संस्करण स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ नियमित वा मुख्य रूपमा प्रयोग नगर्ने ती हो। मात्र अवस्थामा।
काममा लागौं। हामी कसरी macOS Monterey 12.2 को बिटा संस्करण स्थापना गर्न सक्छौं हेरौं। हामीले सुरु गर्यौं.
यदि तपाइँसँग पहिले नै विकासकर्ता प्रोफाइल दर्ता छ भने सबैभन्दा सजिलो कुरा हुनेछ। त्यस अवस्थामा, यो प्रणाली प्राथमिकताहरू> सफ्टवेयर अपडेटहरूमा जानु र एप्पलले भर्खरै जारी गरेको नयाँ संस्करण डाउनलोड गर्न जत्तिकै सरल छ। यदि यो मामला छैन भने, तपाईंले पढ्न जारी राख्नुपर्छ। यो गाह्रो प्रक्रिया होइन, तर यसलाई अझ सजिलो बनाउनको लागि चरणहरू राख्न कहिल्यै दुख्दैन।
1 macOS Monterey 12.2 beta डाउनलोड र स्थापना गर्नु अघि ब्याकअप गर्नुहोस्
2 macOS सार्वजनिक बिटाको लागि आफ्नो खाता दर्ता गर्नुहोस्
macOS Monterey 12.2 beta डाउनलोड र स्थापना गर्नु अघि ब्याकअप गर्नुहोस्
बिटा संस्करणमा सामेल हुनु अघि, तपाईंले गर्नु पर्छ तपाईको म्याकको ब्याकअप। यसरी, यदि केहि गलत भयो भने, वा यदि तपाईं दुखी हुनुहुन्छ र अघिल्लो अवस्थामा फर्कन चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले सुरु गरेको ठाउँमा फर्कन सक्नुहुन्छ।
यद्यपि तपाईले सामान्यतया स्वचालित ब्याकअप बनाउनुहुन्छ, यसले म्यानुअल ब्याकअप गर्न हानि गर्दैन। सबै भन्दा राम्रो तरिका यो गर्न हुनेछ टाइम मेसिन मार्फत।
हामी आइकनमा क्लिक गर्छौं समय मेशीन द्वारा हाम्रो म्याकको मेनु पट्टीमा।
हामी क्लिक गर्छौं जहाँ यसले भन्छ आहिले संचित गर।
जारी राख्नु अघि ब्याकअप समाप्त हुन दिनुहोस्। तपाइँ पहिले नै थाहा छ कि तपाइँ टर्मिनल मार्फत पनि प्रतिलिपि कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो अर्को कथा हो। हामी जारी...
हामीले लिनु पर्ने अर्को कदम भनेको एप्पललाई भन्नु हो हामी बिटा परीक्षक कार्यक्रममा सामेल हुन इच्छुक छौं।
macOS सार्वजनिक बिटाको लागि आफ्नो खाता दर्ता गर्नुहोस्
यदि तपाइँ पहिले कहिल्यै सार्वजनिक बिटामा सामेल हुनुभएको छैन भने, तपाइँले आर बाट सुरु गर्न आवश्यक छआफ्नो एप्पल आईडी संग लग इन गर्नुहोस्।
मा दर्ता गर्न ठेगानामा नेभिगेट गर्नुहोस् बिटा कार्यक्रम।
हामी क्लिक गर्छौं जहाँ यसले भन्छ रजिस्ट्रार सुरु गर्न। (यदि तपाईंले अघिल्लो सार्वजनिक बिटाको लागि साइन अप गर्नुभएको छ भने, साइन इन गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस्।)
हामीले हाम्रो पहुँच डाटा मार्फत राख्यौं एप्पल आईडी
हामी लग इन गर्छौं.
हामी छिट्टै डाउनलोड सुरु गर्नेछौं। हामीले परीक्षण उपकरणहरूमा सामेल हुनको लागि हाम्रो म्याक दर्ता गर्नुपर्छ र Apple लाई थाहा छ कुन परीक्षण सफ्टवेयर स्थापना गरिएको छ। यसरी तपाईले कति व्यक्तिले चीजहरू राम्रोसँग जान मद्दत गरिरहेका छन् भनेर ट्र्याक राख्नुहुनेछ। यो macOS Monterey को सार्वजनिक बिटा संस्करणको डाउनलोड सुरु गरेर मात्र गरिन्छ जुन सफ्टवेयर अपडेटहरूमा प्रणाली प्राथमिकताहरू मार्फत गरिन्छ।
टांक macOS सार्वजनिक बीटा पहुँच उपयोगिता डाउनलोड गर्नुहोस्।
फाइल खोल्नुहोस् र स्थापनाकर्ता चलाउनुहोस्।
जब स्थापनाकर्ता डाउनलोड समाप्त हुन्छ, प्रणाली प्राथमिकताहरू स्वचालित रूपमा सफ्टवेयर अपडेट सेक्सनमा खुल्नेछ। हामी सार्वजनिक बिटा सफ्टवेयर डाउनलोड र स्थापना गर्न अपडेट क्लिक गर्छौं। सफ्टवेयर डाउनलोड भएपछि, तपाईंको म्याक स्वतः पुन: सुरु हुनेछ। सार्वजनिक बिटा अपडेटले डाउनलोड पूरा गर्न लामो समय लिन सक्छ, आकार मा निर्भर गर्दछ। हामी प्रणाली प्राथमिकताहरूको प्राथमिकता प्यानल सफ्टवेयर अपडेटहरूमा स्थिति जाँच गर्न सक्छौं।
एकचोटि हामीले यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि, हामीले यसलाई स्थापना गर्नु पर्छ ताकि यसले हाम्रो म्याकमा काम गर्न थाल्छ। सामान्यतया स्थापनाकर्ता स्वचालित हुन्छ। तर यदि यो आफैले सुरु गर्दैन वा तपाइँ यसलाई पछिको लागि छोड्न चाहानुहुन्छ भने, तपाइँ स्पटलाइट मार्फत वा खोजकर्ताको अनुप्रयोग फोल्डरबाट स्थापनाकर्ता खोल्न सक्नुहुन्छ।
हामी स्थापनाकर्ता सुरु गर्छौं। हामी "जारी राख्नुहोस्" छनौट गर्छौं। यो तब हुन्छ जब तिनीहरूले हामीलाई ब्याकअप बनाउन सल्लाह दिन्छन्। तर हामीले पहिले नै अनुमान गरिसकेका छौं र हामीले यो गरेका छौं। त्यसैले हामी जारी राख्छौं।
हामी सर्तहरू स्वीकार गर्छौं र कुनै पनि स्थापना को अन्य कानूनी मुद्दाहरु। र हामी हाम्रो चयन पुष्टि गर्छौं।
हामी यो चयन गर्दछौं एकाइ जसमा हामी बिटा स्थापना गर्न चाहन्छौं। केवल यदि तपाईंसँग धेरै विकल्पहरू छन्। सामान्य कुरा यो क्षेत्र देखा पर्दैन।
हामी पहिले हाम्रो राखी बिना स्थापना गर्न अगाडि बढ्छौं प्रशासक पासवर्ड र ठीक क्लिक गर्नुहोस्।
हामी रिबूट गर्दछौं वा अझ राम्रो, हामी यसलाई आफैं रिबुट गरौं।
यो सबै भयो, हामीसँग पहिले नै macOS Monterey को बिटा 12.2 स्थापित छ र हामी समाचारको आनन्द लिन सक्छौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » ट्यूटोरियलहरू » तपाइँको Mac मा macOS Monterey 12.2 beta कसरी डाउनलोड गर्ने
CleanShot X म्याकको लागि अद्यावधिक गर्दछ र नयाँ फाइल ढाँचा थप्छ
Notchmeister को साथ आफ्नो MacBook Pro को निशान सजाउनुहोस्